Maalinta: Abriil 18, 2017
Blue Voyage wuxuu ka bilowdaa Van Lake: 'Safarka buluuga ah ee' Blue Voyage 'wuxuu ka bilowdaa Van Lake isagoo raacaya basaska badda ee degmada Van Metropolitan County. Xilliga xagaaga, waaxda Gaadiidka Badda, [More ...]
Gawaarida xamuulka ee '5's Trolley Vehicle' waxay ku yaalliin Wadooyinka tareenka: Gudaha baaxadda mashruuca Akçaray, oo ay si deg deg ah u dhiseyso Kocaeli Magaalo Weyn, gawaarida taraamku waxay kusii socdaan magaaladeena. Tan shanaad kadib markii afar gaari ay yimaadeen [More ...]
Xalka Radicalka ee Gaadiidka Magaalada
Xalka Tooska ah ee Wadada Magaalada Bursa ee taraafikada: Si kasta oo ay Bursa u balaadhiso gerçeği Si kasta ha noqotee xarumo cusub oo soo jiidasho ah ayaa laga sameeyay aagagga cusub ee la deggan yahay, xaqiiqda ah in Atatürk Street iyo Sculpture ay tahay bartamaha magaalada. [More ...]
TCDD, Cayayaanka Xakamaynta Cayayaanka
Digniinta ka-hortagga faafa ee TCDD: TCDD 2 Agaasime Goboleed, oo ah Agaasimaha Guud ee Tareenka Waddooyinka ee Waddanka Turkiga (TCDD), ayaa lagu dabaqi doonaa ku-sumaynta ka-hortagga haramaha jidadka tareenka. [More ...]
Mashruucyada Aksaray waxaa lagu sii wadi doonaa Mersin xadiid xawaare sare leh: Maamulaha Guud ee TCDD İsa Apaydın, Aksaray-Ulukışla mashruuca Xawaaraha Xawaaraha Sare ee goobta. Kırıkkale (Delice) Kırşehir-Aksaray-Niğde (Ulukışla) Mashruuca Xawaaraha Wadada-Xawaaraha ee ku socda shaqada Aksaray-Ulukışla [More ...]
Maraakiib shidaal oo waaweyn ayaa yimid Marmaray
Markab weyn oo matoor ayaa yimid Marmaray: Soo bandhigiddii Marmaray, xalka dadka ku nool Istanbul wuxuu ka yimid badda. Korantada ay soo saarto markabka matoorrada ee ku xayiran xeebta Yenikapı ayaa dejin doonta magaalada mega. Baahida sii kordheysa ee Wasaaradda Gaadiidka [More ...]
MANN + HUMMEL waxaa loo magacaabay Bixiyaha Sanadka by General Motors: 25 waxaa lagu qabtay Orlando Florida. Munaasabadda abaalmarinta 'Alaab bixiyaha sanadka', General Motors wuxuu doortay MANN + HUMMEL inuu noqdo Bixiye Sanadka. Abaalmarintani waxay si gaar ah ugu tahay nidaamka hawo qaadashada hawada MANN + HUMMEL. [More ...]
RayHaber 18.04.2017 Warbixinta Shirka
Nadiifinta Wagon, Qufulinta iyo goynta waa la heli doonaa (TÜDEMSAŞ) Wadada jiidaha waxaa la iibsan doonaa (TÜVASAŞ) Bidixyada Midig Tareenka bidix waxaa la iibsan doonaa (TÜLOMSAŞ) Adeegga kirada mashiinada dhismaha waxaa lagu bixin doonaa qabanqaabin Slope Manis Bandırma (Manisa Bandırma) [More ...]
Mashruuca Ray Welder ee Mashruuca Shirkadda YOLDER wuxuu bilaabmayaa Maanta
Yoldere Ray alxanle waa Project Sertifikalanıy ku fureyso Maanta: Railway Construction iyo Operating Shaqaalaha Gargaarka iyo Solidarity Association (wadada) waa Taageera Waxbarashada Inta la Noolyahay ee Turkey-II Barnaamijka Grant Midowga Yurub "Ray taageeray [More ...]
Tirada shaqaale ee TCDD ayaa lagu dhawaaqay
Tirada Shaqaalaha TCDD ayaa shaaca ka qaaday: Immisa shaqaale ayaa ka shaqeeya TCDD? Republic of Turkey General Directorate of Maamulka Tareennada State dhawaaqay sano ay 2017 warbixinta waxqabadka. Warbixinta, marka lagu daro tirada shaqaalaha TCDD, qaab dhismeedka, ilaha jirka, [More ...]
Marxaladda cusub ee Tramway
Marxalad cusub oo ku taal Konak Tramway:Karşıyaka Dowlada Hoose ee Magaalada Izmir, oo billowday howlgalada ka hor howlgalka iyadoo ay soo gabagabeyneyso wax soo saarka Tram, ayaa dardar gelisay howlaheeda Konak Tram. Gabay Esref Boulevard, mid ka mid ah heerarka ugu adag ee khadka [More ...]
Ogeysiiska Qandaraaska: Dhisidda derbi dusha sare ee Km: 56 + 700-80 + 000 DE 7400 M oo ka soo jeeda Van-Kapikoy line Erçek-Çimenova
Khadka Van-Kapıköy ee u dhexeeya Erçek-Çimenova Km: 56 + 700-80 + 000 DE 7400 M dhismaha ballaarinta dayactirka gidaarka TC STATE RAILWAYS GUUD EE DIRECTORATE (TCDD) 5. DIIWAANGALINTA DIIWAANKA IYO XAALADAHA Xakameynta Waddada VAN-KAPIKÖY LINE ERÇEK-ÇİMENOVA [More ...]
Gawaarida xamuulka qaada waxaa lagu iibsan doonaa TR GENERAL DIRECTORATE of RAILWAYS STATE (TCDD) HAYDARPAŞA XAALADA KHUDBADAHA HESHIISKA Iibsiga alaabada xamuulka qaada ee furan waa sida ku xusan qodobka 4734 ee 19 [More ...]
Khadka Van-Kapıköy Özalp-Kapıköy Km: 80 + 300-95 + 350 M ballast wuxuu sii hayaa dhismaha darbiga TC STATE RAILWAY MAAMULKA GUUD EE DIRECTORATE (TCDD) 8100. DIIWAANGALINTA DIIWAANKA IYO XAALADAHA XIDHIIDHKA VAN-KAPIKÖY LINE ÖZALP-KAPIKÖY KM: 5 + 80-300 + 95 DE [More ...]